Vibex: iyo yekusagadzikana indekisi mumusika weSpanish wemusika | Ehupfumi Zvemari
Chokwadi hauna kumbonzwa nezveVibex mune yekudyara nyika? Zvakanaka, indekisi iyo inogona kupa kadhi risinganzwisisike yekuvhura kana kuvhara zvigaro mune yakasarudzika indekisi yeSpanish equities, iyo Ibex 35. Nekuti mukuita, Vibex ndiyo indekisheni yekusagadzikana yemusika weSpain. Iko kunofanirwa kutarisirwa mupfungwa kuti kusagadzikana kunoverengwa zvakananga kubva pamitengo yesarudzo cheni kuyera mutengo wega wega Nedaro rayo kubva kune yepasi nhumbi. Izvo chaizvo muchinhu ichi kuti ino chaiyo yekutanga stock index inozviratidza.
Iyo Vibex seizvi haina kusanganisira kuchengetedzeka kana makambani akanyorwa. Iri mune imwe nzira indekisi yekutya pamwe neiyo VIX muUnited States uye izvo zvinoshandiswa kuziva mamiriro chaiwo emisika yemari panguva yakapihwa. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti zvinoratidza izvo zvinogona kuitika kuti misika yezvemari ichatora. Ehezve, haisi bhuku rekunongedzera iro rinowanzoonekwa munhau dzehupfumi. Chete nguva nenguva uye nechimwe chikonzero icho hachinei nemutengo wemusika wenyika unoenderera.
Kubva pane ino mamiriro ese, isu tichaenda kutarisa kuti iyi index inogona sei kukubatsira pane imwe nguva muhupenyu hwako hwekudyara. Kuburikidza nemamwe madiki madiki aunogona kuisa mune ako mashandiro kubva zvino zvichienda mberi. Nekuti iwe haugone kukanganwa kuti inogona kukupa iwe ekupinda uye kubuda mazinga mumisika yenyika yequity uye kunyanya iyo Ibex 35. Unongofanira kuzviziva nekushandisa kwayo uye kutarisisa mafambiro aanogona kufanotaura.
1 Vibex: zviyero zvekushomeka
2 Iyo inoshanda sei mumusika wemasheya
3 Mukushanda kwenguva pfupi
4 Kutya kunotengeswawo pachena
5 Yakabatana kwazvo neiyo VIX
6 Referensi sosi yevarimi
Vibex: zviyero zvekushomeka
Pamwe unoona kuti zita rake inouya kubva kuIbex 35 uye pamwe netsamba v inoenderana nekusagadzikana. Chirevo chizere chezvinangwa nezve izvo zvauchazowana kubva ikozvino. Tinofanira kutsvaga zviwanikwa zvedu zvemuno muVibex uye kana tichida kuyera kusagadzikana kwepasirese ipapo tichafanirwa kuenda kune rimwe divi reAtlantic, kuburikidza neVIX iyo yatakambotaura nezvayo. Iwo haasi indices ayo anoteverwa zvakanyanya nechikamu chakanaka chevashambadzi vadiki nepakati, asi kugona uku kunogona kuchinja kubva zvino zvichienda mberi.
Dambudziko hombe rinowanikwa nevatengesi vevatengesi nderekuti havazokwanise kuritevedzera zvakanaka sezvo risiri kuratidzwa mune vazhinji mapuratifomu emari. Kana zvisina kudaro, pane kudaro, hatizove nesarudzo kunze kwekuenda kunzvimbo dzakasarudzika uko kwakakosha chiratidzo chemusika wemasheya. Kana isu tikapedza dambudziko iri tinenge tave nyore kusimudzira kwekushanda mumusika wemasheya. Saka kuti nenzira iyi, chikamu chemazano ako ekudyara. Sezvo nehunyanzvi hwekuongorora, chishandiso chine simba pakutenga nekutengesa masheya.
Iyo inoshanda sei mumusika wemasheya
Ehezve, kana tangoziva iyo Vibex, hapana mubvunzo kuti isu tichava neruzivo rwakawanda nezve izvo zvatinofanirwa kuita muSpanish equities. Chete kumisika yenyika sezvo simba rayo mumisika yepasi rose risina kutwasuka sezvazviri zvine musoro kufungidzira kana uchisimbisa zita rayo. Chaizvoizvo inoyera kusagadzikana kweiyo inosarudzika indekisi yeSpanish equities uye kunoonekwa kuti kune yakawanda kusagadzikana, mucherechedzo wekuvhara nzvimbo nekukurumidza. Nekuti icho chidiki diki nezve maitiro ayo misika yemari inogona kutora kubva panguva iyoyo zvichienda mberi. Ndokureva, bearish, mune yakaderera kana yakakura kusimba uye iyo inogona kuve nzvimbo yekutanga kuve mune chinzvimbo chemari yakazara.
Pane zvinopesana, kana iyo Vibex inoratidza kuti kusagadzikana kushoma, yambiro iwe yaunogona nzvimbo dzakashama paIbex 35 pasina matambudziko makuru. Kwete pasina, anofungidzira kuti izvo zvinowedzera zvinogona kuiswa muzvikamu zveSpanish. Pamusoro pehumwe hunyanzvi hwekufunga uye pamwe kunyangwe kubva pakuona kwezvakakosha. Naizvozvo, yakakosha rutsigiro rwekubatsira kuitira kuti iwe ugone kuita sarudzo dzako zvine chinangwa chikuru kupfuura pakutanga. Nekuverenga mune iko kukanganisa kutaura kudiki kwazvo uye kuti haufanire kurerutsa.
Mukushanda kwenguva pfupi
Kunyangwe zvese zvichizoenderana nezano raunoshandisa nguva dzese. Uye pamusoro pezvose, iyo nguva yekusingaperi iyo yako investments ichaendeswa kune: pfupi, pakati kana refu. Nekuti usakanganwa kuti iyo Vibex inonyanya kubatsira mu mapfupi nguvandiko kuti, mumabasa emusika wemasheya nekukurumidza kugadzirisa. Ndipo apo mashandiro ayo ari akakurisa nekuti munguva refu haigone kushanda senge rutsigiro rwekuita mashandiro mune izvi zviwanikwa zvemari.
Mupfungwa iyi, matsva eIbex 35 indices achangotangwa neSpanish Stock Exchanges neMisika (BME). Aya maIndices ane hukama nekusagadzikana uye zvine hungwaru pamwe nesarudzo uye yakakosha kumberi kune vanoita mari. Zvekuti nenzira iyi vanobvumidza kuongororwa kwakaringana kwenzira dzakadzika dzekusagadzikana dzinogadzira alpha. Uye nekudaro ita kuti kuchengetedza kwacho kubatsire ine zvivimbiso zvakakura zvekubudirira mumabasa anoitwa mumisika yemari yenyika. Ndokunge, shure kwezvose, chinangwa chakateedzerwa nevashambadzi vadiki nepakati.
Kutya kunotengeswawo pachena
Sezvakaita index yeVIX muUnited States, iyo Vibex calibrate kutya nevatengesi, mune imwe pfungwa kana imwe. Hazvishamisi kuti zvinoratidza mamiriro ako epfungwa uye kwaunogona kunongedza mafambiro ako mumazuva anotevera. Izvo hazvigone kukanganwika kuti mune izvi zvemari zvinhu, kusagadzikana uye nharaunda ndicho chinopfuura chinongedzo chiri pachena, uye icho chinhu icho vatengesi vane ruzivo rwakanyanya mumisika yemari vanoziva. Kusvika pakuti ivo vanogona kutora mukana wezviitiko zvakakosha. Zvese kuvhura uye kugadzirisa zvigaro mumisika yemari.
Kubva pane ino generic nzira, hapana mubvunzo kuti isu tinofanirwa kupa mukurumbira kune ino index yatiri kutaura nezvayo muchinyorwa chino. Nehukuru hwakaenzana sehumwe huwandu hunomiririrwa mukuongororwa kwehunyanzvi, uye izvo zvinogona kutungamira kune optimization yekufamba mumusika wemasheya. Nechinangwa chega chete chekuita iyo mari inobatsira pamusoro pezvimwe zvinhu. Hazvishamisi kuti, chinangwa chavo ndechekuita sezviratidzo zvemusika, nekuti kuburitswa kwechinhu chero chipi zvacho chine chekuita navo hakutarisirwe munguva pfupi. Usakanganwe izvi kana iwe uchida kuzadzisa izvo zvinangwa zvako mumisika zvinozadziswa nenzira inogutsa kune zvako zvaunofarira.
Yakabatana kwazvo neiyo VIX
Ehe, pane zvakawanda zvakafanana neAmerican VIX nekuti chinangwa chayo chakangofanana kubva mubumbiro rayo. Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kuyeukwa kuti iyi stock index ndiyo kodhi yepamutemo inonzi Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index. Panguva iyo paine kusagadzikana kukuru, iyo VIX inosvika panhamba yepamusoro uye mukufamba kwakapesana inoderera zvakanyanya. Dzimwe nguva uchipa nhungamiro pane zvaunofanira kuita kunatsiridza purofiti mumisika kusiyanisa mari. Ichi chinhu chiri nyore kwazvo kune vashoma uye vepakati varimi kuti vafunge. Haisi zvachose zano rakaomarara sekugona kunzwisiswa nevamwe panguva ino.
Kune rimwe divi, haugone kukanganwa kuti mune aya mareti indices Ivo havataure kuchengetedzeka kana chero chinhu chakadai. Iwo manzwiro emusika ari panjodzi uye nekudaro ivo vari kukupa iwe yakakosha chiratidzo nezve chii chiri chiitiko icho iyo misika yemasheya inogona kutora kubva panguva chaiyo chaiyo. Nekuvimbika kwakanyanya nekuti hazviwanzo kuita zvisirizvo kupa kuongororwa pamusoro peicho chokwadi chemari. Nenzvimbo yepamusoro yepfungwa mukushandurwa kwematanho ayo, sezvo zvine musoro kufunga kune rimwe divi.
Referensi sosi yevarimi
Chekupedzisira, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti iyi indekisi inonzi kutya inoenda kutora nzvimbo yepakati gore rega uye zvinowanda uye kazhinji kuti icho chinozivikanwa sosi yekureva kune vadiki nepakati varimi. Pamusoro pemamwe marongero anoshandiswa mune yakazvimiririra yekudyara chikamu. Seimwe yemisiyano iyo inopa nekuremekedza mamwe mamodheru kuti uite idzi nzira dzakanyanya. Iko iko kwekutanga kuri kuziva zvinoitwa nemisika yemari. Uye ndeipi nzira iri nani kupfuura kuburikidza neiyi stock index yatiri kutaura nezvayo muchinyorwa chino.
Hapana mubvunzo kuti chirevo chemusoro uyu chichava chakabata pfungwa dzevaverengi vedu. Iko kwakanyanya kukosha chinhu ndechekuti ivo vanogona kubatsirwa kubva kune iyi index kuita mamwe mabasa anobatsira kubva zvino zvichienda mberi. Kunze kwekumwe kufunga kuchazovharwa mune zvimwe zvinyorwa pamusika wemari. Zvekuti ivo vagone kushandiswa nechero investor chimiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Vibex: iyo index yekusagadzikana mumusika weSpanish wemusika